Email "IATA Fraud Alert" ga -emebi kọmputa gị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Otu email “IATA wayo alert” ga -emebi kọmputa gị
Airlines • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • News • Safety • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Otu email “IATA wayo alert” ga -emebi kọmputa gị
IATA kpughere isi ihe eji eme ihe nke IATA Travel Pass
IATO.org abụghị IATA.org, kama ọ bụ adreesị ozi -e mebere aghụghọ na -anwa izuru njirimara gị ma ọ bụ mebie ma bibie kọmputa gị.
A na -ekesa ozi ịntanetị sitere na adreesị a ugbu a nye ụlọ ọrụ njem IATA kwadoro ma ọ bụ mmekọ.
Ụlọ ọrụ nwere email nloghachi [email protected] na -ezipụ ozi ịntanetị nje na ebumnuche ibibi sistemụ kọmputa ndị njem.
Emebere email ahụ iji duhie ndị nnata iji mepee ihe mgbakwunye ọjọọ echekwara na nke a na-akpọ pass-code.
IATA azaghị ya.
Otu ụlọ ọrụ omempụ zigaara email phishing ozi na ndị ọrụ njem US jikọtara na IATA,
Ọ dị ka email a sitere na IATA, the Ndị na - ahụ maka ụgbọ elu mba ofesi.
Email na -arịọ ndị na -anabata ya ka ha mepee njikọ ọjọọ ma jiri okwuntughe enyere iji mee ya. Ozugbo onye nnata gụnyere paswọọdụ a, mgbakwunye ga -eji edemede ọjọọ metọọ kọmpụta.
Email ọjọọ sitere na iato.org (ọ bụghị iata.org) na -agụ:
Ezigbo onye nnọchite anya,
Abatala na IATA na aghụghọ na -aga n'ihu nke ndị ohi na -enweta sistemụ ntinye akwụkwọ nke ndị ọrụ ma na -enye tiketi ụgbọ elu. Mwakpo a bụ ọkaibe nke ukwuu, na -eduga ọ bụghị naanị nnukwu mfu ndị ọrụ, kamakwa na -emebi usoro onye nnọchi anya ya.
Iji chebe onwe gị pụọ n'ọtụtụ mwakpo ndị a, anyị na -akwado usoro nchedo agbakwunyere.
Maka ebumnuche nchekwa, jiri koodu a mepee mgbakwunye: 123
Ọrụ ndị ahịa IATA
Onye ọ bụla na -enweta ụdị email a kwesịrị ihichapụ ya wee hichaa ahịhịa.